NPL | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Main Ma
Ancient Myanmar Humorous Poem 1 →
May 3, 2010 · 10:49 am
နေဘုန်းလတ် PEN ကပေးတဲ့ ရွှေကလောင်ဆုရတော့ သတင်းရေးဖို့ မှတ်ချက်တွေ တောင်းခဲ့တယ်။ တချို့က မပေးတာလည်း ရှိတယ်။ တချို့ကပေးပေမယ့် နောက်ကျနေတယ်။ သတင်းကတော့ အချိန်နဲ့ အမီဆိုတော့ ရသလောက်နဲ့ ပေးလိုက်တယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ဒီမှာ စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချခံထားရသော အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုနေဘုန်းလတ် (ခေါ်) ကိုနေမျိုးကျော်ကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ရေးသားခွင့် အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ သောကြောင့်၂၀၁၀ ရွှေကလောင်ဆု (2010 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award) ကို ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အခြေစိုက် PEN American Center ၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ (from Irrawaddy)
♦ ကိုနေဘုန်းလတ် .. 2010 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award ဆုကို ရတယ်ဆိုတာ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်..
နောက်ပြီး မြန်မာ ဘလော့ကာ တစ်ယောက်က ဒီဆုမျိုးရတယ်ဆိုတော့ လွပ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ အမှန်တရားဆီ ချီတက်နေတဲ့ Blogger တွေ Citizen journalist တွေ အတွက်လည်း ခွန်အား တစ်ရပ်ဖြစ်စေပါတယ်..။
ဘယ်လို အကျပ်အတည်း အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေပါစေ တရားကိုစောင့်ရှောက်သူကို တရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတဲ့ လောကပါလ တရားအတိုင်းပါပဲ.. ကိုနေဘုန်းလတ်အပါအဝင်.. လူအခွင့်အရေး တရားမျှတမှုအတွက်.. ငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်တင်ပြတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေ ဘလော့ဂါတွေ၊ စာပေပညာရှင်တွေ အတွက်ပါခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ဒီဆုချီးမြှင့်တဲ့ PEN American Center ကိုပါ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
♦ တချို့က ပြောတယ် ဆုလိုချင်ရင် အဖမ်းခံရမလိုပဲ ဖြစ်နေပြီတဲ့။
အမှန်မှာက ကျွန်မသူငယ်ချင်း နေဘုန်းလတ်အနေနဲ့က ကိုယ့်အတ္တကို နောက်တန်းထားပြီးမှ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပေးဆပ်လိုက်လို့ လူကိုယ်တိုင်တောင် ဆုပေးပွဲတက်ရောက်ရင်း ရယူသင့်ရယူထိုက်တဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါ။
ဘာရမှာပါပဲ ဘာရမှ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ လုပ်နေခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွေ အကြောင်းသုံးပါးတွေ မစဉ်းစားပဲ သူလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်စရာရှိတာမှန်သမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်သွားခဲ့တဲ့ ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီထက်မက ဆုတင်မက မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာတစ်နေရာတောင် ရသင့်သေးတယ်လို့ ထင်မြင်ပါသေးတယ်။
Ma Mi (မယ်လိုဒီမောင်)
♦ သူ အခုလို ဆုရရှိတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သူ့ကဗျာတွေကိုလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကဗျာတွေထဲမှာ ကျနော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကျနော်နှင့် လောက မှတ်တိုင်များ ဆိုတဲ့ ကဗျာရှည်ပါ။ သူ ့ရဲ့ ဘလော့ဂ် ဘန်နာမှာ
ကြိုးပြတ် နေတဲ့ ဂစ်တာတလက်ဟာ ကျနော် ဖြစ်တယ် လို ့သူက ရေးထားပါတယ်။ ခုတော့ ကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဂစ်တာ တလက်ကနေ အလှပဆုံး သံစဉ်တွေ ထွက်လာခဲ့တဲ့ အတွက် သူ အခုလို ဂုဏ်ပြုခံရတာလို့ ခံစားမိပါတယ်။
♦ ၂၀ဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက စိတ်ဓါတ်တက်ကြွခိုင်မာစွာနဲ့ အမှန်တရားကို ရဲရဲရင်ရင့် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူ။ သူရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး (Generation Wave) ဆိုတဲ့ လူငယ်အစုအဖွဲ့ နဲ့ ဆက်စပ်မိရင်း ကျော်ကျော် ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ တော်လှန်ရေး ညီအကိုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်တွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် အဖမ်းခံသွားရပြီလို့ နီးစပ်သူတွေ ကျွန်တော့်ဆီ ပြောလာတဲ့အချိန်မှာ သူ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားကြပါတယ်။ သူ အဖမ်းခံရတဲ့ သတင်းအတွက် အများသူငှာ သိရအောင်လည်း ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
သူ … နေဘုန်းလတ်၊ သူ .. ကျော်ကျော် .. အမှန်တရားအတွက် ပြောရဲဆိုရဲ လုပ်ရဲတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပါ၊ အင်မတန်ကို လေးစားရပါတယ်။ သူ့လို အမှန်တရားကို တန်းဖိုးထားပြီး ပြောရဲဆိုရဲ လုပ်ရဲတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ရော အခုအချိန်မှာရော အင်မတန်လိုအပ်နေပါတယ်။ အားကိုးမျှော်လင့်နေပါတယ်။
♦ ခုလို ဆုမျိုးရတဲ့အတွက် သံလွင်အိပ်မက်ဝိုင်းတော်သားများ အားလုံးက ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိသလို သူငယ်ချင်း နေဘုန်းလတ် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး သံလွင်အိပ်မက်မှာ တတပ်တအား ပြန်လည် ပါဝင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းနေပါတယ်
♦ ကျွန်တော်သိတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပညာတတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ထောင်လွှား မာန်မာနမရှိဘူး. လုပ်နိုင်စွမ်းပေမယ့် ဂုဏ်ဖော်လေ့မရှိဘူး. သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးပေမယ့် ပျော့ညံ့အားငယ်လေ့မရှိဘူး. ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်ပေမယ့် နေရာယူလေ့မရှိဘူး.
ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်က ကိုယ်သိတာကိုယ်တတ်တာကို မသိုဝှက်မထိန်ချန်ဘဲ ပြန်လည်ဝေမျှတတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်တိုင်ရှေ့ရောက်နေရုံနဲ့တင်မကျေနပ် အားမရနိုင်သေးဘဲ တစ်ခြားသူတွေကိုပါ လက်တွဲခေါ်ချင်တဲ့သူ၊ အယူဝါဒ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့သူ၊ လူတစ်ဖက်သားကို နားလည်စာနာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် ပီသတဲ့သူ…
ဒီလိုလူငယ်တစ်ယောက်ကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုတာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ စာရေးဖော် စာရေးဖက် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်.
ကိုနေဘုန်းလတ် အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်း ဆန္ဒပြုမိပါတယ်.